Boeing sy Alaska Airlines mahatonga ny sidina ho azo antoka kokoa sy maharitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Boeing sy Alaska Airlines mahatonga ny sidina ho azo antoka kokoa sy maharitra » Page 2
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny haitao amin'ny programa dia misy:
Fitsapana maso mpamono afo vaovao ho an'ny fiaramanidina izay mampihena be ny fiatraikany amin'ny sosona ozone. Ity fitaovana ity dia natao hanolo ny Halon 1301, izay tsy mamokatra intsony.
Miara-miasa amin'ny US National Oceanic and Atmospheric Administration mba handrefesana ny haavon'ny entona entona amin'ny atmosfera hanohanana ny modelin'ny toetrandro sy ny vinavinan'ny maso ivoho maharitra.
Ny fanombanana ny hevitra arofanina akustika ao anatin'ny motera nacelle izay mety hampihena ny tabataba amin'ny motera ankehitriny ary hampahafantatra ny volavola ho an'ny maodelin'ny taranaka ho avy.
Fanamboarana fitaovana vita amin'ny karbaona vita amin'ny gazy avy amin'ny famokarana elatra Boeing 777X ho tontonana amin'ny sisin-trano. Ity fitaovana maivana sy maivana ity dia hampihena ny fampiasana solika sy ny gazy karbonika ary manohana ny tanjon'i Boeing amin'ny famokarana maharitra.
Ny fiaramanidina Boeing amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy dia mampiasa teknolojia marobe voadinika tamin'ny andrana ecoDemonstrator teo aloha, anisan'izany ny:
Advanced Technology winglets ao amin'ny fianakaviana 737 MAX izay mampihena ny fampiasana solika sy ny entona.
Fampiharana iPad izay manome toetrandro tena izy sy tahirin-kevitra hafa ho an'ny mpanamory fiaramanidina, manatsara ny fahombiazan'ny solika ary mampihena ny CO2 emissions. Ireo fampiharana ireo dia mameno ny serivisy fanaovana fanadihadiana nomerika natolotr'i Boeing hanampiana ireo zotram-piaramanidina hanatsara ny fampiasana fiaramanidina.
Rafitra fakantsary amin'ny 777X vaovao izay hanatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo mpanamory fiaramanidina hisoroka ireo sakana amin'ny tany.
"Ny Boeing dia nanisy fanamafisana fanampiny momba ny faharetana amin'ny taona 2020 hifanaraka amin'ireo mpiray antoka sy ny laharam-pahamehan'ny orinasa ary koa ny soatoavinay," hoy i Chris Raymond, tompon'andraikitra ambony momba ny fahasalamana. "Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria, ny programa ecoDemonstrator dia ohatra iray lehibe amin'ny fanolorantenantsika ny fiaraha-miasa mba hahatonga ny sidina ho azo antoka sy maharitra ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy."
Ny sidina ecoDemonstrator dia manidina amin'ny fifangaroan'ny solika mifototra amin'ny solika sy maharitra. Ny SAF dia ampiasaina tsy tapaka ankehitriny, mampihena ny tsingerin'ny fiainana CO2 emissions hatramin'ny 80%, ary manolotra ny mety haingana indrindra sy lehibe indrindra hampihenana ny fandefasana entona mandritra ny 20 ka hatramin'ny 30 taona ho avy eo amin'ny tsenan'ny fiaramanidina rehetra.
Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nanolo-tena i Boeing fa hanao izay hahitan'ny seranam-piaramanidina ara-barotra sy manamarina ny manidina amin'ny SAF 100% amin'ny 2030. Nikasa hiara-hiasa amin'ireo manampahefana mifehy sy manerana ny indostria ihany koa ny orinasa hampiakarana ny fetra fampifangaroana 50% ankehitriny hampiasaina bebe kokoa an'ny SAF. Ny ecoDemonstrator 2018 Freight an'ny Boeing dia nanao ny tantaran'ny sidina fiaramanidina voalohany voalohany manidina amin'ny solika maharitra 777%.
Sambany any Jamaika: nahatratra 100% ny hotely Jakes ...
Dakar mankany New York City sy Washington amin'ny Air Senegal ...
Misokatra amin'ny ...